Ụlọ ọrụ igwe eletriki igwe, ndị na -ebunye ya - ndị na -emepụta igwe eletriki igwe eletriki China
500w 750w Steel Frame Sport Ebike 26 Inch Ndị okenye Fat Snow Tire Lithium Batrị Electric Mountain Bike Bicycle Ịgba ígwè.
Njupụta nchekwa ike dị elu, oriri onwe onye dị ala, arụmọrụ dị elu, enweghị egwu maka ibu dị elu
26inch 48v 500w 1000w Taya Abụba Nkwụsị zuru oke Ugwu igwe Mtb Electric Bike Ike Ike igwe kwụ otu ebe e-Bike Bicicleta Eléctrica
Ụdị ịnyịnya ígwè a bụ nke kachasị ewu ewu ugbu a. Ọdịdị ya na -ahụ anya na nnukwu taya nnukwu abụba na -adọtakarị igwe mmadụ. N'iji ya tụnyere ụdị ndị ọzọ, ọ nwere ike nye gị mmetụta adịghị umeala n'obi.
26inch Batrị Lithium Abụba Tire Electric Mountain Bike / 500w 1000w Snow Bike / Brushless 48v 12ah Electric Electric Bicycle with Fast Speed.
Bọkịnya eletriki ike gwụrụ ngwa ngwa na -aghọ otu n'ime ebike kachasị ewu ewu na ahịa taa, yana ezi ihe kpatara ya.
Ụgbọ eletriki eletrik nwere abụba nwere uru nke inwe taịị abụba buru ibu nke 4-inch, nke nwere ihu ala karịa, na-enye traction na nkwụsi ike.